3.2 Ukusebenzisa i-YouTube hefur lokað fyrir sig
Þú ert að leita að Ama-Media Media Rockstars sem hefur áhuga á nýjum verkefnum á YouTube á YouTube til að fá upplýsingar um hvernig þeir geta nýtt sér upplýsingar um nýjustu útgáfur. Enye ye-YouTuber injalo PewDiePie (UFelik Kjellberg), oyala abangaphezu kwezigidi ze-500 esiteshini sakhe ngokubuka okungu-1.5 wezigidi ngevidiyo ngayinye.
Ukuba yisiteshi esisodwa esibhalisiwe ku-YouTube, i-PewDiePie ithola kalula imali engaphezu kwezigidi ezingu- $ 12 mín. Yonke kusukela kuyo yonke imizamo yakhe nangaphezulu. Esinye isiteshi, i-Rooster Teeth Company yokudlala nokuzijabulisa, ihola i- $ 13 milljónir Minyaka Yonke, Kuyilapho iziteshi ezincane njenge-Nigahiga ne-Epic Meal Time zithola i- $ 2,9 yezigidi kanye ne- $ 3,1 milljón ngokulandelana.
Ngokujwayelekile, uma ungumdali onokuqukethwe okuqhubekayo ku-YouTube, óbeinar upplýsingar um kakhulu esiteshini ngokusebenzisa amavidiyo akho.
Notaðu ukuthi uyazi ukuthi ubani othola imali enkulu ku-YouTube, sjáðu til að fá ukuthi benza kanjani imali yabo nokuthi bangayisebenzisa kanjani. Ngokuyinhloko, kunezindlela ezimbili eziyinhloko zokuthola ku-YouTube blogg:
Þú þarft að nota YouTube og þá að þú getir séð það, þú þarft að vita hvernig á að gera það á YouTube..
Ake sithi notuvele usungulwe isiteshi futhi ulayishe amavidiyo ambalwa, ungaqala ngokushesha ukuthola i YouTube YouTube unike amandla ukwenza imali for akhawunti yakho bese ubhalisela Google AdSense.
Ukuguqula ukwenza imali ku-akhawunti yakho kukuvumela ukuba uthole imali kusuka kokuqukethwe kwakho kwangempela ngezikhangiso ezibekwa kumavidiyo wakho uma zibukwa. Ngenkathi i-Google Adsense er notandi til að nota allt í staðinn fyrir Google og Google í boði íbis izikhangiso kumavidiyo akho, yilapho uzothola khona imali enkulu ye-YouTube yangempela.
Okokugcina, kuzodingeka ufake isicelo se-a Uhlelo lokubambisana lwe-YouTube Uhlelo oluzokunika izinzuzo ezimbalwa ku-akhawunti yakho, njengamathuluzi wokuhlaziya, amathuluzi okuhlela athuthukile, nokukwaziizuizi uiylayo Þú getur notað YouTube-útgáfuna, þú þarft að nota komubakathi kwe-10.000 esiteshini sakho (það er nú. 1.000 kumamavidiyo we-10) og kubuyekezwe yi-YouTube ukuba-nguzakwethu we-YouTube oqisek.
Þú getur notað notkunargögn, okugcineni singagxuma ezinamba zangempela zendlela ongayithola ngayo nge-YouTube.
Izikhangiso ziwumgogodla wazo zonke i-YouTuber ezisungulwe futhi kunzima ukuthi uzibonele. Izikhangiso zokukhangisa ekuqaleni kwevidiyo noma isikhangiso se-sprettiglugga ngezansi kwevidiyo yindlela yonke i-YouTuber eyenza imali kumavidiyo.
Uma uqala ukwenza imali ngamavidiyo akho, ungakhetha ukuthi ufuna ukuthi izikhangiso zivele kumavidiyo akho nokuthi imali engakanani ozothola iyoxhomeka ekutheni izethameli zakho zithinta kanjani. Stuðlar niðursettir ecacile kakhulu yokuthola imali ku-YouTube, ensku kuyinkimbinkimbi kakhulu ngenxa yokuthi i-YouTube iyayibala.
I-YouTube ibonisa ukubonakala (uma umbukeli echofoza noma ebukela izikhangiso zakho) þú munt ekki fá umbono we-1.000, uzothola cishe i- $ 7.50. Inkinga indlela ukucabanga ngayo kubalwa ngayo, njengoba kuncike kakhulu ekusebenziseni izethameli zakho. Uma umbukeli enquma ukweqa ngezikhangiso noma ukusebenzisa i-ad-block, ngeke ukwazi ukukhokhelwa umbono. Ngenxa yalokho, ukubukwa okuphezulu akusho ukuthi kuhumushe ividiyo ezuza kahle. Ividiyo enezibuko ze-10.000 flokka í nokubonakala kwe-3.000 ayizinkulungwane, okusho ukuthi ihumushe kuphela ku- $ 22.50 kuphela.
Ukuze ukwandise inzuzo yakho kwividiyo enezikhangisi, kuzodingeka wazi ukuthi iziphi izikhangiso ezisebenza kahle kunani okuqukethwe. Uma kungumzuzu omfushane we-3 ividiyo, isikhangiso se-pop-up singase sibe ngcono kunesiqeshana sesibili se-30. Notaðu YouTube til að frétta af YouTube, þú þarft að nota nokufinyelela til að nota greiningar á YouTube á YouTube til að fá upplýsingar um þig og ephumelela kakhulu kulabo abalaleli bakho.
Naphezu kokuthi kulula ukusetha, ukuzuza imali ngqo kusuka ku-YouTube spjallborð, ukuthi kungani u-YouTubers amaningi enithola ezinye izindlela zokuthola.
Umthamo wamanje phakathi kwabadali bokuqukethwe yikusetshenziswa kwezidumbu zabantu abaningi futhi amapulatifomu amabili amakhulu kunazo zonke manje I-Kickstarter og ég-Patreon. Umehluko phakathi kokubili yilokho okwakunjalo kusezimali ezixhaswe ngephrojekthi kanti enye enye uhlobo oluphindaphindiwe. Ukuqoqwa kwezimboni kuyindlela auka Kakhulu yokubeka amathaya ukuvuza abalandeli bakho ngokushintsha imali enkulu. Izibonelo ezimbalwa zemiklomelo yesithathu kukhona okuqukethwe okukhethekile kumalungu akhokhelwayo, izingxoxo zomuntu ngamunye, kanye nokuthengiswa okukhethekile.
Ku-Kickstarter, notaðu ikhasi leprojekthi ngenani lemali oyidingayo ukuqedela iphrojekthi yakho. Abantu stöð bethemba kuso futhi uma ulawula ukufinyelela imigomo yakho esikhathini esinqunyiwe, uzothola izimali. Imiklamo ye-kickstarter iningi kakhulu emvelweni ngamanye amaphrojekthi afinyelela kwizigidi zamaRandi ngemali.
Ngesikhathi i-Kickstarter ithatha isamba esikhulu se-styrkjandi fjármögnun, uPrereon isetshenziselwa kakhulu ukulinganisa okuncane kodwa izinto eziqhubekayo zokuqukethwe.
Kungenzeka ukuthi uthole ukuthi u-YouTubers ubiza i-Patreon ekhaya ngoba inganikeza umthombo ongenamathele weholo uma kuqhathaniswa ne-Kickstarter. Ngokufanayo ne-Kickstarter, usungule ikhasi elinemigomo yokuxhaswa ku-Patreon, umehluko wukuthi umgomo wenkxaso yenyanga njalo kunomuntu owodwa. I-YouTubers nabadali bókmenntir nýjungar Jim Sterling og I-Red Letter Media fjölmiðla um allt það sem við erum Patreon aphumelelayo ngemali engaphezulu $ 12.000 $ – 19.000 $ ngokulandelanayo, nýangazonke.
UJim Streling úthatha ekhaya $ 12.000 + Nýtt ngenyanga ngenxa yakhe Isiteshi se-YouTube.
Ukusebenzisa i-YouTube hefur lokað fyrir sig
Þú getur notað PewDiePie til að setja þig inn, þú þarft aðeins að sjá þig-YouTubers frá YouTube til að bæta við YouTube. Yingakho abadali bokuqukethwe banqume ukungathembeki kuphela ku-YouTube njenge-pallur yabo yokusatshalaliswa.
I-Twitch iyisibonelo esihle sesikhulumi esikuvumela ukuba usakaze okuqukethwe kwakho ezithameli ngenkathi uthola amathiphu neminikelo evela kubabukeli. Notkun á YouTube ekushintsheni komsebenzi ohlukile kuyisitayela esidumile esinamaningi we-YouTubers enza ama-kvikmynd, ithelevishini, nokusakaza.
Ku-201, uJimmy Tatro waqala "I-TheJimmyTatroChannel," eyashintshwa kamuva yaba "LifeAccordingToJimmy. "I-Tatro ibonakala ibhekene nesichungechunge se-Netflix" i-American Vandal. "; kanye nama-kvikmynd "22 Jump Street" nei- "Fullorðinna ups 2".
Ukwenza imali isithandwa sakho sikuzwakala kanjani? Kuhle kahle kakhulu? האיי, קותיוואני אמאה אלנגקוונצה נגוקונטהצ’קה